Tora Muhoro wePassive neBlogs - TMC App
Wana Passive Mari NemaBlog
Wese munhu anoti munhu nzira dziri nyore dzekuita mari zviri nyore kubva kumba ndeye internet. Ehe, zviri nyore chaizvo kumisa sevhisi yewebhu nemari shoma kana isina kumberi asi mibvunzo yakawanda. Iwe unowana sei vashanyi kune yako saiti uye maitiro ekuita kuti vatenge zvigadzirwa zvako kana kudzvanya mubhadharo wako pakudzvanya kushambadzira?
Chekutanga, ngatitarisei maitiro ekuita mari online. Kana iwe usina chinhu chako, unogona kuita mari online kunyange. Izvi zvinoreva kuti hapazove nemutengo wekutenga uye logistic zvakare.
Imwe yenzira dzekuita mari online ndeyekugadzira blog saiti. Kugadzira saiti yeblog kunobatsira. Enda unonyorera Google Adsense uye Google ichaisa ads pane yako blog saiti. Kana vashanyi vari panzvimbo yako yebhurogi vanodzvanya zviziviso zvako, google ichakubhadhara komisheni uye iwe unogona kuwana mubhadharo wepamwedzi kubva kuGoogle.
Iye zvino, kuitira kuti vanhu vauye kubhurogi rako saiti uye mushure meizvozvo kudzvanya pane ako ads, yako blog saiti inofanirwa kuwanikwa. Nzira yakanakisa yekuti saiti yako yebhurogu iwanikwe ndeye kuburikidza neinjini dzekutsvaga kubva zuva rega rega, kune mamirioni kana asiri mabhiriyoni ekutsvaga kunoitwa painternet. Chii zvakare, kana saiti yako ichiwanikwa painternet, saka uri kuwana vashanyi uye vangangove vatengi kune yako blog mahara.
Dambudziko nderekuti kune mabhiriyoni emabhurogi masaiti uye mawebhusaiti kunze uko uye vanhuwo zvavo havatarise kupfuura peji rechipiri rekutsvaga injini yekutsvaga mhinduro. Kuzvitaura zviri nyore, kana bhurogi rako rikasasvika kumapeji maviri ekutanga echero peji rekutsvaga, haringango wanikwa uye fungidziro yako kuita mari iri nyore kumba inodonha kunze kwekunge iwe wakosora mari uye woshambadzira yako. site.
Ko kana saiti yako yebhurogu ichikwanisa kuita iyo yekutanga 2 mapeji emainjini ekutsvaga akawanda emazwi ako akakosha? Hei, iwe unenge uchiwana zviuru zvevaenzi zuva rega rega uye kuwana mazana kusvika kuzviuru zvekudzvanya pane ako kushambadzira.
Zvino fungidzira chii chichaitika kana iwe uchidzokorora maitiro aya zvakare uye zvakare zvakare? Iwe unozove neakawanda nzizi dzekungoita mihoro isina mari yekudyara kana njodzi yesangano. Kumisikidza mablogiki inzira iri nyore yekuwana mari, hongu, asi kuwana bhurogi rako kuwanikwa kunoda rimwe basa. Zvakadaro, kana zvangoitwa, iwo mablogiki anogona kunge akasiiwa kumutyairi wemotokari.
Zvakanaka, kune mazana ezvinhu zvekutsvaga injini zvinotariswa paunenge uchiisa yako blog saiti saka zvichave zviri nyore kwandiri kuti ndizvitsanangure mune pfupi positi seizvi. Kana iwe ukaenda kuwebhu uye kunyora mu "seo" kana "SEO", iwe unowana akawanda mameseji nemabhuku anogona kukudzidzisa nzira yekuwana inotungamira masanji muinjini yekutsvaga yepamhepo.
Iwe unoda kutsvaga nzira dziri nyore dzekuita mari? Tsvaga maitiro ekuwana epamusoro ekutsvaga injini chinzvimbo cheblog rako. Zvimwewo izvo, iwe ungangoda kushandisa imwe mari kushambadza bhurogi rako uye kudzoka kwekudyara kungave kusiri izvo zvauri kuyedza kutsvaga.
Imwe yenzira dzekuita mari online ndeyekugadzira blog. Zvino, kuitira kuti vanhu vauye kubhurogi rako uye vozodzvanya pakushambadzira kwako, saiti yako yebhurogi inofanirwa kuwanikwa. Nzira yakanakisa yekuti saiti yako yebhurogu iwanikwe ndeye kuburikidza neinjini dzekutsvaga nekuda kwekuti zuva rega rega kune mamirioni kana asiri mabhiriyoni ekutsvaga kunoitwa painternet. Kumisikidza mablogiki inzira iri nyore yekuwana mari, hongu, zvisinei kuwana saiti yako yebhurogi yakawanikwa inoda rimwe basa. Zvimwe ipapo izvo, iwe unozonyanya kuisa mari yekushambadzira yako blog saiti uye kudzoka kwekudyara kwemari kungave kusiri izvo zvauri kutsvaga.